Masoandro Vanim-potoana faha-2: Daty famoahana: Fanamafisana ny fanavaozana... - Fialam-Boly
Vanim-potoana faha-2 Sunflower: Daty famoahana: Fanamafisana ny fanavaozana na fanafoanana!
Daty famoahana ho an'ny vanim-potoanan'ny Sunflower 2
Ny sarin'ny Sunflower Season 2
Ny mpilalao amin'ny Sunflower Season 2
Niteraka ny fientanentanan'ny rehetra tao amin'ny vanim-potoanan'ny Sunflower 2,ary eto izahay hameno anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao.
Fatin'olona irery sy vitsivitsyNy ahiahiana ihany no ilaina hamaritana ny andian-tantara an-tserasera an'i Zee5 Sunflower tamin'ny taona 2021! Rehefa hita mazava fa ny iray amin'ireo voarohirohy dia omena tsiny kokoa noho ny hafa, ny andian-tranonkala dia mitodika any amin'ny toerana mampientam-po. Tena mampientam-po sy mahafinaritra kokoa ilay andian-dahatsoratra noho ny tsiambaratelo feno hafetsena sy ny antony miafina.
Noho izany,Samy voarohirohy amin’ny asan-jiolahy ve ireo voampanga na mivantana na ankolaka, sa atao hoe mpiara-miampanga fotsiny? Na inona na inona miseho amin'ny fahamarinana, dia misy zavatra betsaka kokoa noho ny zava-misy.
Ny mpanaony fandaharana dia tsy mbola nilaza na havaozina na tsia. Mihoatra noho ny fanavaozana ny vanim-potoana faharoa, tsy misy antsipiriany hafa momba ny fotoana hanombohan'ny famokarana mialoha ny vanim-potoana faharoa. Ankoatra izany, mbola tsy manomboka ny fanoratana ho an'ny vanim-potoana faharoa.
Amin'izao fotoana izao,tazonina ao ambanin'ny fonony ihany koa ny mombamomba ny fizaran-taona faharoa.
Satria ny sériembola tsy manomboka ny famokarana ary tsy vita ny scénario, mety hanantena isika fa hivoaka amin'ny tapaky ny volana ny vanim-potoana faharoa amin'ny andiany.2022, mifototra amin'ny fironana taloha.Mbola tsy namoaka fanambarana ofisialy momba izany ny mpamokatra, fa havaozinay ianao raha misy fiovana.
Nalaina an-keriny i Sonuavy amin'ny fianakavian'i Gurleen ary nahazo tsolotra handehanana any Jalandhar, izay nilalao ny anjara toerana voalohany tamin'ilay sarimihetsika. Raha fantatra fa i Sonu no tompon’antoka tamin’ity asa ratsy ity dia mbola eo am-pikarohana azy ny mpitandro filaminana.
Tsy hitan'izy ireo i Sonu satria ao an-trano ny findainy.Ny fifantohana amin'ny vanim-potoana faharoa amin'ny Sunflower dia ny fitadiavana an'i Sonu sy ny fianarana bebe kokoa momba ny heloka bevava nataony. Nandritra ny famotorana azy ireo dia saron’ny polisy ny zava-dehibe kokoa.
Ny mpanaony voana tanamasoandro eran'ny Web Series, araka ny novakiako, dia mikasa ny hamatotra ny zava-drehetra amin'ny vanim-potoana 2. Voalaza fa nalaina an-keriny i Sonu ary naterin'ny fianakaviana Gurleen malaza any Jalandhar tamin'ny vanim-potoana voalohany. Ahiana ho tena mpamono olona i Sonu, ary efa eo am-pitadiavana azy ny polisy.
Rahavavy Vadin'ny Vanim-potoana faha-17: Manana fampahalalana mampientam-po momba ny datin'ny famoahana!
Wandavision vanim-potoana 2: Mbola hisy ve izany?
Lupine vanim-potoana faha-3: nofoanana sa havaozina?
Hatreto, ny vanim-potoana faharoa dia nifantoka tamin'ny fitadiavana an'i Sonu sy ny fianarana bebe kokoa momba ireo syringe hita tao an-tranony.
Tafavoaka velona ao amin'ny tany rava ao Dysterra!
Inona no atao hoe QuickBooks Cloud Hosting?
ahoana no hametrahako chromecast amin'ny solosaina findaiko
manakatona fampiharana misokatra amin'ny iphone x
halo tsy voasintona tsy alaina ao am-pianarana
sarimihetsika maimaim-poana sy streaming tv
mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra iray amin'ny iray maimaim-poana
ahoana no hanovako ny rakitra m4a ho mp3
ahoana ny fanafoanana ny volana maimaim-poana amin'ny Netflix